Ungalunciphisa njani ifuthe lokuKhangela xa ufudukela kwiNdawo eNtsha | Martech Zone
Ulicutha njani ifuthe lokuKhangela xa ufudukela kwiDomain entsha
NgoMvulo, Juni 20, 2016 NgeCawa, nge-29 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Njengakwiinkampani ezininzi ezikhulayo kunye neepivot, sinomthengi ozala ngokutsha kunye nokufudukela kwindawo eyahlukileyo. Abahlobo bam abenza injini yokukhangela bayasebenza ngoku. Imimandla yakha igunya ngokuhamba kwexesha kwaye ukukrazula elo gunya kungenza itanki yakho yokugcwala.
Ngelixa iGoogle Search Console ibonelela nge utshintsho lwesixhobo sedomain, into abayityeshelayo ukukuxelela indlela ebuhlungu ngayo le nkqubo. Kubuhlungu… kubi. Ndenze i-domain change kwiminyaka emininzi eyadlulayo kwibhlog yeTekhnoloji yokuThengisa ukwahlula uphawu kwigama lam lobuqu, kwaye ndalahla phantse onke amagama am aphambili epremiyamu kunye nawo. Kuthathe ixesha ukubuyisa impilo yendalo endakha ndanayo.
Ungawunciphisa umgangatho wokukhangelwa kwendalo ngokwenza umsebenzi othile wokucwangcisa kwangaphambili kunye nomsebenzi wokwenza umsebenzi, nangona kunjalo.
Nalu uluhlu lokujonga kwangaphambili lwe-SEO
Hlaziya i-backlinks yommandla omtsha -Kunzima ukuba ufumane isizinda esingasetyenziswanga ngaphambili. Ngaba uyazi ukuba idomain yayisetyenziswa ngaphambili okanye hayi? Isenokuba yeyomzi mveliso omkhulu we-SPAM kwaye ivaliwe ziinjini zokukhangela zizonke. Awuyi kwazi de wenze uphicotho lwe-backlink kwisizinda esitsha kwaye ungavumeli naziphi na amakhonkco athandabuzekayo.
Hlaziya i-backlinks esele ikho -Ngaphambi kokuba ufudukele kwisizinda esitsha, qiniseka ukuba uchonga zonke izinto ezingasemva onazo ngoku. Unokwenza uluhlu ekujoliswe kulo kwaye iqela lakho le-PR linxibelelane nesiza ngasinye esiqhagamshele kuwe ukubacela ukuba bahlaziye amakhonkco abo kwisizinda esitsha. Nokuba ufumana nje isandla, kunokubangela isaphulelo kwamanye amagama aphambili.
Uphicotho lwendawo -Amathuba kukuba une-asethi enophawu kunye nokunxibelelana kwangaphakathi konke okunxulumene nedomain yakho yangoku. Uya kufuna ukutshintsha zonke ezo makhonkco, imifanekiso, iiPDF, njl. Kwaye uqinisekise ukuba ziyahlaziywa nje ukuba ziye kuhlala kwindawo entsha. Ukuba indawo yakho entsha ikwindawo yeqonga (kucetyiswa kakhulu), yenza ezo zilungiso ngoku.
Chonga amaphepha akho anamandla e-organic - ngawaphi amagama aphambili obekwe kuwo kwaye ngawaphi amaphepha? Olu luhlu oluya kufuna ukubeka esweni usebenzisa isixhobo esinjengamaqabane ethu Iilebhu zeShift. Ungachonga amagama anamagama anamagama, amagama aphambili kwingingqi, kunye namagama aphambili kwizikhundla ezikumgangatho wakho kwaye ulinganise indlela ozibuyisela ngayo emva kotshintsho lwesizinda.
Phinda uthumele i-domain ngokufanelekileyo -Uya kufuna ukuhambisa kwakhona ii-URL ezindala kwii-URLs ezintsha ezinesizinda esitsha sefuthe elincinci. Awufuni wonke umntu oza kwiphepha elitsha lekhaya lakho lesizinda ngaphandle kwesaziso. Ukuba uthatha umhlala phantsi amanye amaphepha okanye iimveliso, unokufuna ukubazisa kwiphepha lesaziso bethetha ngotshintsho lophawu, kutheni inkampani ikwenzile oko, kwaye apho banokufumana khona uncedo.
Bhalisa i-domain entsha kunye ne-Webmasters -Ngena kwangoko kwii-Webmasters, bhalisa isizinda esitsha, kwaye ungenise imephu yakho ye-XML ukuze indawo entsha ikhutshwe kwangoko nguGoogle kwaye iinjini zokukhangela ziqale ukuvuselela.
Yenza utshintsho lweDilesi - yiya kwinkqubo yotshintsho lwesixhobo sedilesi ukwazisa uGoogle ukuba ufudukela kwindawo entsha.
Qinisekisa ukuba uhlalutyo lusebenza ngokufanelekileyo -Ngena kwi kubahlalutyi kunye nokuhlaziya i-URL yepropathi. Ngaphandle kokuba unokuseta okuninzi okunxulumene nesizinda, kuya kufuneka ukwazi ukugcina okufanayo kubahlalutyi akhawunti up for thambeka kwaye baqhubeke imilinganiselo.
Yazisa iisayithi ezidibanisa ne-domain yakudala -Uyalukhumbula olo luhlu silwenzileyo lwe-backlink ethembekileyo nefanelekileyo? Lixesha lokuba uthumele ngezo imeyile iipropathi kwaye ubone ukuba bayawahlaziya amanqaku abo ngolwazi lwakho lwamva nje lokunxibelelana kunye nophawu. Okukhona uphumelele apha, kokukhona kuya kubuya amazinga akho.
Uphicotho-zincwadi lokufuduka emva -Ixesha lokwenza olunye uphicotho-zincwadi lwesiza kwaye ujonge kwakhona awunazo naziphi na amakhonkco angaphakathi akhomba kwidomeyini yakudala, nayiphi na imifanekiso enezinto ezikhankanyiweyo, okanye nasiphi na esinye isibambiso esinokufuna ukuhlaziywa.
Ukubeka iliso kwizinga kunye nokuGcinwa kweNdalo Beka esweni inqanaba lakho kunye nokugcwala kwezinto eziphilayo ukuze ubone ukuba uphumelela kangakanani kutshintsho lwesizinda.
Yandisa iinzame zakho zoLuntu Lixesha lokuba uhambe emva komgca ngamnye ongena kuwo ukuze ubeke izandla zakho ngoku ukunceda inkampani yakho iphinde ifumane igunya kunye ne-injini yokukhangela. Ufuna incoko eninzi phaya!
Ndingacebisa kakhulu uthotho lomxholo wepremiyamu opapashiweyo ukuze wenze ukubonwa okukhulu. Ukusuka kwisibhengezo sophawu lwentengiso kunye nokuba kuthetha ntoni kubathengi bangoku kwii-infographics kunye namaphepha amhlophe ukucela impendulo enkulu kwiindawo ezifanelekileyo.
tags: ukufuduka kwesizindaI-google webmastersidilesi entshaukufuduka kwesizinda esitsha
Juni 26, 2016 ngo-11: 21 PM
Ezi ziingcebiso ezilungileyo! Kuyinyani ngokwenene xa amaxabiso aphambili ngamaxabiso asezantsi anokutshona kakhulu xa ubuyela kwidomain entsha. Kufana nokumanga konke ukusebenza kwakho nzima kwaye uqalise ukukwenza kwakhona.